I-PassbeeMedia: Ikhuphoni yeFowuni egqibeleleyo, iWallet kunye neQonga lokunyaniseka | Martech Zone
PassbeeMedia ivumela abasebenzisi ukuba benze ngokulula kwaye basasaze ukulungelwa kweselfowuni Incwadi yokundwendwela ka-Apple, Google kunye Samsung Wallet unikelo lwasekhaya, ukujongana kunye neekhuphoni kubathengi kwihlabathi liphela ngeqonga elilula, lokuzixhasa elifikelela kubathengi apho bakwi-Intanethi nakwizixhobo zabo eziphathwayo.
Ngelixa amanye amaqonga entengiso eselfowuni anikezela ngeempawu ezimbalwa, PassbeeMedia ine-suite ebanzi yezixhobo zokuthengisa ezihambayo-kubandakanya i-QR code coupons, ukuthumela imiyalezo, amatikiti edijithali, izipaji zedijithali, iBeacon, iinkqubo zokunyaniseka kunye namakhadi, ii-URL ezimfutshane, kunye nenkqubo ye-whitelabel yeearhente.
Uqala njani ngePassbeeMedia
Khetha isicwangciso esinye sezine elingana kakuhle neshishini lakho. Ukusuka kumashishini awodwa kunye namancinci, ukuya kumashishini aphakathi okanye nakwiinkampani ezinkulu.
Yakha umnikelo wakho -Khetha kwenye yeetemplate zethu zobuchule ezenziwe kwangaphambili ukuze wenze iphulo lakho ngokwezifiso. Okanye ukuba uyila uyilo ongathanda ukulusebenzisa kwakhona, ungagcina njengeetemplate ezintsha.
Ukuhambisa kunye neMakethi -Bopha amandla apheleleyo amaqonga amajelo eendaba ezentlalo, i-SMS kunye ne-imeyile ukunxibelelana nabo bonke abathengi bakho.
Landa umkhondo wakho ngokwendlela, ukwahlulwa komsebenzisi kunye nokusebenza kweqonga kusetyenziswa ideshibhodi ye-PassbeeMedia yohlalutyo.
Ukubhengezwa: Siyinxalenye ye Passbeemedia!
tags: incwadi yokupasa yeapileamatikiti edijithaliii wallet zedijithaliGoogle walletibeaconamatikiti endawoamadili endawounikelo lwasekhayaamakhadi okunyanisekaInkqubo yokunyanisekaamatikiti eselulaiqonga lokuthengisa eliphathwayopassbeemediaIikhowudi zekhowudiInkqubo yembuyekezoisipaji samsungii-urls ezimfutshanei-SMSimiyalezo ebhaliweyoiselfowuni emhlophe